Qindaa'inoota bakkabu'iinsa daangaalee ilaallatan ifteessa.
Marfatoota kabalaa fi saratoon akka mul'atan ifteessa.
Sarartoo dalgaa mul'isa. Gita tarree keessaa yuniitii safaraa feete filadhu.
Sarartoo olee mul'isa. Gita tarree keessaa yuniitii safaraa feete filadhu.
Sarartoo olee xiyyoo mirgaa wajjin walqixxeessa.
Dalagaa marfataa fuulaa suutaa agarsiisa. Saffisni marfataa bal'inaa gad fageenaya halluu irratti hundaa'a.
Miseensota galmee kamtu akka agarsiifaman qindeessa.
Argama saxaatoo karaa saajoo Graphics On/Off to'achuu dandeessa. Yoo barruun banaa ta'e, saajoon kun kabala Tools irratti mul'ata.
Gabateewwan galmee kee keessa jiran mul'isa.
Xiyyoowwan gabatee mul'isuuf, gabatee kamiyyuu mirga cuqaasiitii Xiyyoowwan Gabatee, yookiin Gabatee - Xiyyoowwan GabateeBarreessaa galmee keessaa filadhu.
Fakkisootaa fi to'annoowwan
Fakkisootaa fi to'annoowwan galmee kee keessa jiran agarsiisa.
Yaadannoo mul'isa. Barruu gulaaluuf yaadannoo cuqaasi. Yaadannoo agarsiisuuf yookiin balleessuuf baafata haallee Navigator keessaa fayyadami. Yaadannoo kana yookiin hunda yookiin kan barreessaa hundaa balleessuuf baafata haallee yaadannootti fayyadami.
Qindaa'inoota(galmee HTML qofaaf)
Yuniitii safaraa(galmee HTML qofaaf)
Galmeelee HTML tiif the Yuniitii ifteessa.